Iwu kuki | The Rward Foundation - Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Kuki na otú ha si aba uru
Nke a na-akọwapụta usoro kuki nke Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị na-eji kuki, dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ weebụsaịtị niile, ime ka ị nweta ahụmịhe kachasị mma anyị nwere ike. Kuki bụ obere faịlụ ederede na-etinye na kọmputa gị ma ọ bụ na ekwentị mkpanaaka mgbe ị na-agagharị na ebe nrụọrụ weebụ. Ihe omuma nke kuki kuki abugh gi onwe gi, mana apuru iji ya nye gi ihe omumu nke onwe gi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara ojiji kuki niile, biko gaa na Cookiepedia - banyere kuki niile.
Kuki anyị na-enyere anyị aka:
Mee ka webụsaịtị anyị rụọ ọrụ dịka ị tụrụ anya
Cheta ntọala gị n'oge na n'etiti nleta
Meziwanye ọsọ / nchebe nke saịtị ahụ
Na-enye gị ohere ịkekọrịta ibe weebụ na netwọk mmekọrịta dika Facebook
Na-aga n'ihu na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ anyị dị mma
Mee ka ahịa anyị dịkwuo mma (na-enyere anyị aka ịnye ọrụ anyị na-arụ na ọnụahịa anyị na-eme)
Anyị anaghị eji kuki iji:
Na-anakọta ozi ọ bụla ị nwere ike ịchọta (na-enweghị ikikere gị kwupụtara)
Na-anakọta ozi ọ bụla (n'enweghị ikike izipụtara gị)
Nwefe data na netwọk mgbasa ozi
Nyefee data nkeonwe ndị ọzọ
Na-akwụ ụgwọ ụlọ ahịa
Ị nwere ike ịmatakwu banyere kuki niile anyị na-eji n'okpuru
Na-enye anyị ikikere iji kuki
Ọ bụrụ na ntọala na ngwanrọ gị nke ị na-eji iji lelee weebụsaịtị a (ihe nchọgharị gị) na-agbanwe iji kweta kuki anyị were nke a, na ị nọgidere na-eji ebe nrụọrụ weebụ anyị, nke pụtara na ị dị mma na nke a. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ma ọ bụ na-eji kuki n'aka saịtị anyị, ị nwere ike ịmụta otu esi eme nke a, mana ime nke a nwere ike ịpụta na saịtị anyị agaghị arụ ọrụ dịka ị ga-atụ anya ya.
Ọrụ Weebụ Kuki: Kuki anyị
Anyị na-eji kuki iji mee ka ọrụ weebụ anyị gụnyere:
Icheta ntọala ọchụchọ gị
Enweghị ụzọ isi gbochie ịchọta kuki ndị a karịa ka ị ghara iji saịtị anyị.
Kuki na saịtị a bụ Google Analytics na Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ.
Ọrụ nke atọ
Ebe nrụọrụ anyị, dị ka ọtụtụ weebụsaịtị, gụnyere ọrụ ndị ọzọ nyere. Ihe omuma atu zuru oke bu vidio YouTube. Ebe nrụọrụ anyị na-agụnye ndị na-esonụ kuki:
Google (YouTube) - amụma nzuzo
Ịkwụsị kuki ndị a ga-agbaji ọrụ ndị ndị ọzọ na-enye
Yabụ ị nwere ike 'Dị ka' ma ọ bụ kesaa ọdịnaya anyị na saịtị dịka nke Facebook na Twitter anyị etinyela bọtịnụ nkesa na saịtị anyị.
Ejiri kuki site na:
Njirimara nzuzo nke a ga-adị iche na netwọk mmekọrịta na netwọk mmekọrịta ma dabere na ntọala nzuzo ị họọrọ na netwọk ndị a.
Enweghi Akwukwo Ntaneti ndi nleta
Anyị na-eji kuki iji chịkọta ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa dịka mmadụ ole gara leta weebụsaịtị anyị, ụdị ụdị teknụzụ ha na-eji (dịka Mac ma ọ bụ Windows nke na-enyere aka ịmata mgbe saịtị anyị anaghị arụ ọrụ dị ka o kwesịrị maka otu teknụzụ), ogologo oge ha na-anọ na saịtị ahụ, peeji ndị ha na-ele anya wdg. Nke a na-enyere anyị aka imeziwanye weebụsaịtị anyị. Ndị a na-akpọ 'nchịkọta' ?? Mmemme na-agwakwa anyị, n’aha na-enweghị aha, etu ndị mmadụ siri rute saịtị a (dịka site na igwe nchọta ihe) na ma ha nọrọ ebe a tupu ha enyere anyị aka ịmata nke ọdịnaya ndị kacha ewu ewu.
Nchịkọta Google. Can nwere ike ịchọtakwu banyere ha Ebe a.
Anyị na-ejikwa Google Analytics 'Demographics na Mmasị Mmasị, nke na-eme ka anyị mata echiche afọ ole na afọ nke ndị ọbịa na saịtị anyị. Anyị nwere ike iji data a iji meziwanye ọrụ anyị na / ma ọ bụ ọdịnaya.
Igbanye Kuki Gbanyụọ
Ị nwere ike na-agbanwe kuki site na ịhazi ntọala ihe nchọgharị gị iji kwụsị ya ịnakwere kuki (Mụta otu Ebe a). Ime otu a nwere ike belata ọrụ anyị na oke weebụsaịtị nke weebụsaịtị ụwa, ebe kuki bụ otu akụkụ nke weebụsaịtị kachasị oge a.
O nwere ike ịbụ na ị na-echegbu onwe gị gbasara kuki metụtara ihe akpọrọ “spyware”. Kama ịgbanyụ kuki na ihe nchọgharị gị ị nwere ike ịchọpụta na sọftụwia spyware na-enweta otu ebumnuche site na ihichapụ kuki na-akpaghị aka. Mụtakwuo banyere kuki kuki na ngwanrọ antispyware.
Ihe ederede kuki na saịtị a sitere na ọdịnaya nke Attacat Internet Marketing nyere http://www.attacat.co.uk/, ụlọ ahịa na-ere ahịa na Edinburgh. Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi dị otú ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nke gị nwere ike iji ha kuki nyocha nke kuki n'efu.
Ọ bụrụ na ị jirila Esochila nchịkọta ihe nchọgharị, anyị na-ewere nke a dịka ihe ịrịba ama na ịchọrọ ịhapụ kuki ndị a, ha ga-egbochi. Ndị a bụ ntọala anyị na-egbochi: